Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: पछिल्लो परिस्थितिले डा. भट्टराईलाई पूर्णतः नंग्याइदिएको छ !
पछिल्लो परिस्थितिले डा. भट्टराईलाई पूर्णतः नंग्याइदिएको छ !
- कपिल काफ्लॆ
एकीकृत माओवादीले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री बन्नलायक दर्जनौं नेता देखाए पनि जनताले योग्य ठानेका दुई नेता मात्र हुन्- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई। तर पछिल्लो परिस्थितिले डा. भट्टराईलाई पूर्णतः नंग्याइदिएको छ। उपाध्यक्षद्वय मोहन वैद्य र नारायणकाजी श्रेष्ठमा प्रधानमन्त्री चलाउने उचाइ आजसम्म देखिएको छैन। वैद्यले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको उहाँकै पार्टीका नेताहरुका शब्दमा कट्टरपन्थी र अव्यावहारिक’ नीतिका कारण उहाँलाई आफ्नै पार्टीले प्रधानमन्त्री मान्न सक्तैन। पछि एकता गर्दै माओवादीमा आएका श्रेष्ठले पार्टीमा पकड बनाउन सकेको देखिँदैन। महासचिव रामबहादुर थापा बादलको अवस्था वैद्यको भन्दा पनि कमजोर बताइन्छ। एकीकृत माओवादीबाट पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुन प्रतिष्ठा र अडानका लागि पद त्याग्नुभयो त्यसको ठीक विपरीत आज डा. भट्टराईबाट एकपछि अर्को गर्दै कुर्सीका लागि सम्झौता गर्ने काम भइरहेको छ। धेरै मन्त्रीलाई म आफैं चिन्दिनँ -भन्दै ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा डा. भट्टराई पुग्नु उहाँकै लागि त हानिको विषय हो नै लाखौं नेपालीमा पनि एकसाथ चोट पार्ने विषय हो। डा. भट्टराईलाई काम गर्न देऊ भनेर युवाजमातले देशमा अभियान चलाइरहेका बेला उहाँलाई परिस्थितिले सर्वाड्ड नांगो पारिदिएको छ। यो परिस्थिति कसले खडा गरिदियो- उहाँकै पार्टीभित्रका कामरेडहरुले वा सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चा वा प्रतिपक्षी पार्टीहरुले
प्रतिपक्षी पार्टीहरुले डा. भट्टराईलाई नंग्याउनेभन्दा आवरणमा सजाउने काममै योगदान दिएका छन्। बाबुरामप्रति चाहिँ हामीलाई भरोशा छ -भन्ने व्यवहार देखाउने काम प्रतिपक्षी पार्टीहरुबाटै भएको हो। तर हतार नगरे पनि हुने विषय सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिन तम्सिने र नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउन रुचि गर्नेजस्ता काम गरेर उहाँले राजनीतिक जुवा खेलिरहनुभयो। छिमेकी भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरेर जुवा खेलेको टिप्पणी गर्ने भट्टराईले मुस्ताङ म्याक्सको जो मितव्ययिताको टेलर देखाउनुभएको थियो चलचित्र -भने त्योअनुसार नभएकामा जनता घिउ र दरबार व्यापारी’ को कथा सम्झिन वाध्य भएका छन्। म नैतिकताको कुरा गरेर बस्ने कि मुलुकलाई द्वन्द्वबाट मुक्त गरेर येनतेत अगाडि बढाउने शान्तिप्रक्रिया र संविधानलाई टुंग्याउने भन्ने असजिलोमा छु मैले पछिल्लो विकल्प रोजें -प्रधानमन्त्री भट्टराईले भन्नुभएको छ। उहाँको अन्तिम लाज बचाउने हो भने शान्तिप्रक्रिया र संविधानले मात्र सक्ने अवस्था छ। ठूलो प्रतिफलका लागि साना कमजोरी क्षम्य हुन सक्छन् -अन्यथा एकीकृत माओवादीमा येनतेन प्रचण्ड नै योग्य रहेछन् -भन्ने निष्कर्ष निस्कनेछ।
Posted by www.Nepalmother.com at 3:49 PM
roshan November 18, 2011 at 12:52 PM
बाबुराम कहिले नाङ्गो थिएन र ? हामी नेपाली उदारमना भएर न हो ....होइन भने प्रचण्डकै भनाई अनुसार ५००० लडाकुलाई ३५००० भनेर सारा दुनिया लगायत हामी नेपाली अनि UNMIN लाई समेतलाई ढांटेर १९००० लडाकु प्रमाणित गर्ने प्रतिनिधि टोलीको प्रमुख यै बाबुराम होईन र? अनि अहिले सम्म आफ्नो त्यो ढाँटको लागि खेद प्रकट वा माफी न मागेर ...हामी सप्पै नेपालीले रगत पसिना एक गरि कमाएको रकम उनीहरुको नक्कली लडाकुलाई भत्ता तलब ख्वाई राखेको होईन ? त्यो पनि टाउको अनुसार तलब थाप्ने होईन रे .....छोडेर गई सकेकाहरुको तलब पनि एक मुस्ट तलब/भत्ता अहिले सम्म बुझी राखेका छैनन् र?
रोशन लाल जोशी